Textile Edepụtara Ede
Tọọzdee 11 Novemba 2021
Textile Edepụtara Ede Ifuru na-agba agba bụ mmemme nke ike ifuru. Ifuru bu ihe a ma ama edere ede dika ede mmadu na akwukwo ndi China. N’adịghị ka ndị ifuru ifuru na-ewu ewu, foto nke ifuru na-emebi emebi na-ejikọkarị ya na jinx na taboos. Nchịkọta ahụ na-eleba anya na-eme ka echiche obodo doo anya na ihe dị egwu ma dị njọ. Ezubere ya na 100cm ruo 200cm ogologo nke tulle, silkscreen na-ebipụta na akwa akwa translucent, usoro akwa ahụ na-eme ka mbipụta ndị ahụ nwee ike ịdịgide na ntanetị, na-ekepụta ngosipụta nke mbipụta na-ese n'elu ikuku.
Mgbanaka Ihe mmebe ahụ na-enweta mmụọ site n ’ụdị nke arch temple na egwurugwu. Ihe motifs abuo - ihe eji eme ya na okpokoro, ka ejikotara iji meputa otu uzo udiri uzo ato. Site na ijikọta obere ahịrị na ụdị dị iche iche na iji ihe dị mfe na nke a na-ahụkarị, nsonaazụ ahụ bụ mgbanaka dị mfe ma maa mma nke a na-eme obi ike ma na-egwuri egwu site n'inye ohere maka ike na udu mmiri ka ọ na-asọ. Site n'akụkụ dị iche iche ụdị nke mgbanaka gbanwere - a na-elele ọdịda ahụ site n'akụkụ ihu, a na-elele akụkụ aka n'akụkụ ya, a na-ahụkwa obe site n'akụkụ elu. Nke a na-agba onye na-akpa ya ume.
Mgbanaka Site na mmegharị ahụ dị mfe, ime ihe iji metụta mmetụta dị mma. Site na mgbanaka aka ahụ, onye mmebe ahụ bu n’obi iji igwe na-agba oyi na nke siri ike mee ka mmetụta a na-ekpo ọkụ na-enweghị ụdị. A na-ejikọ akụkụ abụọ iji mepụta ụda na-egosi mmadụ 2 na-ejide aka. Mgbanaka ahụ gbanwere akụkụ ya mgbe agbanwere ọnọdụ ya na mkpịsị aka ma lelee ya site na akụkụ dị iche iche. Mgbe etinyere njikọ ndị ejikọtara n'etiti mkpịsị aka gị, mgbanaka na-apụta ma ọ bụ edo edo. Mgbe etinyere njikọ ndị ahụ na mkpịsị aka aka, ịnwere ike ịnụ ụtọ ma odo na agba ọcha ọnụ.
Mgbanaka Nhazi Nhazi ahụ nwere ihe eji arụ ọrụ bụ ihe eji arụ ọrụ ya na ejiri jikọtara ya na okwute ahụ. Ihe owuwu a zuru oke ma na-agba mbọ hụ na okwute ahụ bụ kpakpando nke atụmatụ ahụ. Irdị na - adịghị adị nke druzy na bọọlụ ndị na - ejikọta ihe owuwu ahụ na - eweta obere nro maka imewe. Obi siri ike, odighi ike.
180º North East Novel Mọnde 29 Novemba
Ballo Igwe Okwu Mbọsị Ụka 28 Novemba
CATINO Nchịkọta Nke Ụlọ Ịsa Ahụ Satọdee 27 Novemba
Textile Edepụtara Ede Mgbanaka Mgbanaka Mgbanaka Nhazi Ihe Eji Eme Akwa Ọla Ntị